Tesla ichakurumidza kutsigira Apple Music | Ndinobva mac
Kana isu tiri kutaura nguva pfupi yadarika nezverunyerekupe ruripo rwekuti mukana wekuti Apple inogona kuzadza musika nemotokari nyowani yemagetsi yekambani, hatigone kufuratira nhanho dzinogona kunge dzichitorwa nevanopikisana navo. Tiri kutaura pamusoro paTesla uye runyerekupe runodaro inotsigira AppleMusic munguva pfupi.
Parizvino tiri kutaura pamusoro pemakuhwa ari kubuda nezve mukana wekuti Apple ichatangisa mota yayo yemagetsi pamusika. Iyo Apple Car, kana ikaguma ichidaidzwa kudaro, ichave naTesla semukwikwidzi wayo akasimba. Vaongorori varikuto taura kuti kana iyo Apple Mota ichienderera mberi chichava chinhu chakanakisa chinogona kuitika kumusika.
Mafambiro anoita Apple mune izvi anozoongororwa. Asi mafambiro akaitwa nevakwikwidzi vavo uye kunyanya mukwikwidzi wavo akaomesesa mune izvi anozoongororwa. Tiri kutaura nezvaTesla. Zvatinoudzwa nemishumo mitsva ndeyekuti Tesla ichawedzera Apple Music kune yayo mota software.
Parizvino varidzi veTesla ivo vaive chete neSpotify kuteerera mimhanzi mumotokari dzako. Zvinotaridza kuti mune inotevera yekuvandudza chirongwa chemotokari varidzi veApple vanozogona kuteerera kwavo kwavanofarira kuratidza kuburikidza neApple Music.
- Jason Cipriani (@MrCippy) December 27, 2020
Neichi kuiswa kweApple Music muTesla, iko kushambadzira sevhisi yeCalifornian kambani ichave yatovepo mumotokari mbiri magetsi zvakakwana. Rangarira izvo iyo Porsche Taycan yatove nebasa iri.
Tesla ichave neApple Music, Asi hazvingauye zvega Ndokunge, mune yekuvandudza iwe unoona mukana wekuti pachavewo nerutsigiro rweAmazon Music uye Tidal, iyo yekutanga mimhanzi sevhisi.
Tichafanirwa kumirira Ngatione kana runyerekupe urwu runyatso kushanda uye zvirokwazvo tinoona kuti Tesla inotsigira Apple Music mune dzayo dzese magetsi mota.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Tesla kutsigira Apple Music munguva pfupi
Nechangobva kuitika, iyo HomePod mini inotsigira 18W majaja